सतीघाटमा फेरी निर्माण शुरु - नेपालबहस
गृहपृष्ठ अर्थ/व्यापार सतीघाटमा फेरी निर्माण शुरु
युवराज विष्ट / रासस
२२ असोज, भोजपुर । षडानन्द नगरपालिकाको सतीघाटमा फेरी निर्माण हुने भएको छ । नगरपालिकाको रु एक करोड ३५ लाख तथा प्रदेश र केन्द्र सरकारको ६८ लाख गरी करीब रु दुई करोड लागतमा फेरी निर्माणको काम शुरु भएको हो ।
उत्तरी क्षेत्रबाट भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने यो मुख्य सडक खण्ड हो । सडक निर्माण भए पनि नदी तर्ने कुनै माध्यम नहुँदा स्थानीयवासीलाई आवतजावत तथा सामान ढुवानीमा समस्या हँुदै आएको छ ।
सो स्थानमा सवारी साधन तार्नका लागि फेरी लगाउने कामको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । पुल बनाउन ठूलो खर्च तथा लामो समय लाग्ने भएको हुँदा तत्कालका लागि स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा सहज बनाउने उद्देश्यले फेरी निर्माण गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
फेरी निर्माण भएपछि सामान ढुवानी गर्न तथा सङ्खुवासभालगायत अन्य जिल्लासंँग सम्पर्क गर्न यातायातबाट सहज पहुँच हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरप्रमुख वीरबल राईले भने, ‘‘ पुल नहुँदा यहाँका सर्वसाधारणले वर्षौँदेखि कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन्, पुल निर्माण गर्न धेरै समय र लागत लाग्ने भएकोले तत्काललाई फेरी निर्माणको काम अघि बढाएका हौँ ।’’
स्थानीयवासी श्याम कार्कीले भने, ‘‘यो नदीमा पुल नहुँदा हामीले निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ, दीर्घकालीन नभए पनि तत्काललाई फेरी निर्माणको काम शुरु भएको छ, हामी निकै खुशी छौँ ।’’
अघिल्लो लेखपूर्वनवलपुरमा दुई करोड ५० लाखको खसीबोका बिक्री
अर्को लेखमिथिलामा देवी प्रतिमा विसर्जन
लकडाउनमा सवारी पास दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही
लकडाउन अवधिभर उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाका सिल
होसियार ! सैनिक पोशाक लगाएर सवारी चलाउदै हुनुहुन्छ ?
कोरोनाको जोखिम हुन नदिन धादिङमा सील, नाकामा सुरक्षाकर्मी परिचालन
लकडाउनमा सवारी साधन
टाइम कार्ड लागू गरेसँगै पेट्रोलियम पदार्थ खपत दोब्बर
के उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो भएकै हाे त ?
आइतबारदेखि काठमाडौंमा ‘टाइम कार्ड’ लागु हुने
लकडाउन उल्लघंन गर्ने १ हजार ८२१ जना नियन्त्रणमा